Ahene Nhoma a Edi Kan 19:1-21
Yesebel abufuw nti, Elia guanee (1-8)
Yehowa yii ne ho adi kyerɛɛ Elia wɔ Horeb (9-14)
Wɔka kyerɛɛ Elia sɛ ɔnkɔsra Hasael, Yehu, ne Elisa (15-18)
Wɔpaw Elisa sɛ onsi Elia ananmu (19-21)
19 Ahab+ kɔkaa nea Elia ayɛ nyinaa ne sɛnea ɔde sekan akunkum adiyifo no nyinaa+ kyerɛɛ Yesebel.+ 2 Ɛnna Yesebel tuu ɔbɔfo kɔka kyerɛɛ Elia sɛ: “Sɛ ebedu ɔkyena sesɛɛ na memma wonyɛɛ sɛ wɔn* a, anyame no ntua me ka na wɔmfa bi nka ho!” 3 Ɛmaa ehu kaa no, enti ogyaw ne somfo no wɔ hɔ, na oguan peree ne nkwa.*+ Okopuee Beer-Seba+ a ɛwɔ Yuda asaase so.+ 4 Ɔde n’ani kyerɛɛ sare so twaa da koro kwan, na ɔkɔtenaa sisia dua bi ase. Afei ɔsrɛe sɛ onwu.* Asɛm a ɔkae ne sɛ: “Afei de, mabrɛ! O Yehowa, gye me nkwa* fi me nsam,+ na mensen m’agyanom.” 5 Afei ɔdan ne ho too hɔ, na ɔfaa mu dae wɔ sisia dua no ase. Ɛnna ɔbɔfo bi de ne nsa bɛkaa no+ frɛɛ no sɛ: “Sɔre didi.”+ 6 Ɔtoo n’ani hwɛɛ n’atifi no, ohui sɛ paanoo kurukuruwa bi da abo hyehyeehyew so na nsu toa nso si ho. Odidi nomee, na ɔsan dan ne ho too hɔ. 7 Akyiri yi, Yehowa bɔfo no san bae ne mprenu so, na ɔde ne nsa kaa no kae sɛ: “Sɔre didi, na wowɔ kwan twa.” 8 Enti ɔsɔre didi nomee, na ɔde ahoɔden a onya fii aduan no mu no twaa kwan nnafua 40, awia ne anadwo; ɔkɔe ara koduu nokware Nyankopɔn no bepɔw Horeb so.+ 9 Ɛhɔ na ɔkɔɔ ɔbodan bi mu+ kɔdaa hɔ anadwo no; na hwɛ! Yehowa bisaa no wɔ hɔ sɛ: “Elia, dɛn na woreyɛ wɔ ha?” 10 Ɛnna ɔkae sɛ: “Mako ama asafo Nyankopɔn Yehowa,+ efisɛ Israelfo agyaw w’apam,+ na w’afɔremuka nso, wɔadwiriw agu. Wɔde sekan akunkum w’adiyifo,+ na me nko ara na maka. Me nso, wɔrepɛ agye me nkwa* afi me nsam.”+ 11 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Pue kogyina Yehowa anim wɔ bepɔw no so.” Na hwɛ, ná Yehowa retwam,+ na mframa kɛse a ano yɛ den di Yehowa anim repaapae mmepɔw bubu abotan,+ nanso na Yehowa nni mframa no mu. Mframa no akyi no, asaase wosowee,+ nanso na Yehowa nni asaasewosow no mu. 12 Asaasewosow no akyi no, ogya bae,+ nanso na Yehowa nni ogya no mu. Ogya no akyi no, ɛnne bi kasae brɛoo.+ 13 Bere a Elia tee no, ɛhɔ ara na ɔde n’ataade* kataa n’anim,+ na opue kogyinaa ɔbodan no ano. Afei ɛnne bi bisaa no sɛ: “Elia, dɛn na woreyɛ wɔ ha?” 14 Ɛnna ɔkae sɛ: “Mako ama asafo Nyankopɔn Yehowa, efisɛ Israelfo agyaw w’apam,+ na w’afɔremuka nso, wɔadwiriw agu. Wɔde sekan akunkum w’adiyifo, na me nko ara na maka. Me nso, wɔrepɛ agye me nkwa* afi me nsam.”+ 15 Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “San w’akyi, na sim kɔ Damasko sare so. Wudu hɔ a, sra Hasael+ na si no hene wɔ Siria so. 16 Afei nso, sra Nimsi banana Yehu+ na si no hene wɔ Israel so, na Safat ba Elisa* a ofi Abel-Mehola nso, sra no yɛ no odiyifo a obesi w’ananmu.+ 17 Obiara a obeguan Hasael sekan no,+ Yehu bekum no,+ na obiara a obeguan Yehu sekan nso, Elisa bekum no.+ 18 Afei nso, meda so ara wɔ nnipa 7,000 wɔ Israel+ a wommuu nkotodwe nsom Baal,+ na womfew n’ano.”+ 19 Enti ofii hɔ kɔe, na okohuu Safat ba Elisa sɛ ɔrefuntum asaase. Ná anantwi mpamho* 12 di n’anim, na ɔne nea ɛto so 12 no na ɛnam. Ɛnna Elia kɔɔ ne nkyɛn kɔtow n’ataade*+ guu no so. 20 Ɛhɔ ara na ogyaw anantwi no hɔ tuu mmirika dii Elia akyi kae sɛ: “Mesrɛ wo, ma minkofew me papa ne me maame ano mfa nkra wɔn ansa na mabedi w’akyi.” Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔ bra; minsiw wo kwan.” 21 Enti ɔkɔe, na ɔfaa anantwi no abien kum wɔn,* na ɔde nnua a na esuso anantwi no mu yɛɛ anyina noaa wɔn nam, na ɔde maa nkurɔfo no ma wodii. Ɛno akyi no, ɔsɔre kodii Elia akyi, na ɔsom no.+
^ Anaa “memmaa wo kra nyɛɛ sɛ wɔn mu baako kra.”
^ Anaa “ne kra nwu.”
^ Anaa “ne diyifo ataade.”
^ Ɛkyerɛ, “Onyankopɔn Ne Nkwagye.”
^ Anaa “anantwi abien abien.”
^ Nt., “de bɔɔ afɔre.”